ကားလောကကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သော ကားဒီဇိုင်း (၁၃) ခု
လမ်းမတွေပေါ်မှာ မောင်းနှင်နေတဲ့ မော်တော်ကားကို တီထွင်ခဲ့တာ ခုဆိုရင် ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ.။ ဒီအချိန်မှာ ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာက ကားမော်ဒယ်ပေါင်းများစွာကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်.။ ကားအများစုဟာ ဒီဇိုင်းတစ်ခုခုကို အခြေခံပြီး ဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး Innovative လို့ခေါ်ရမယ့် ဒီဇိုင်းပိုင်း တီထွင်ဆန်းသစ်ခဲ့တဲ့ ကားအမျိုးအစားကတော့ အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်.။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကားလောကကို ယခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ ကားဒီဇိုင်းတွေအထိ ပြောင်းလဲလာအောင် ရှေးဦးတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို စုစည်းတင်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်.။
⦁ Concept Car လို့ခေါ်တဲ့ ဈေးကွက်တင်ရောင်းချခြင်း မပြုခင် ကြိုတင်ပြသသော အလေ့အထကို စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကား
1. BENZ'S PATENT-MOTORWAGEN – 1885
2. FORD'S MODEL T – 1908
ဒီကားဟာ ကားလောကကို အချက်သုံးချက်နဲ့ ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်.။ ပထမအချက်ကတော့ Assembly Lines လို့ခေါ်တဲ့ ကားအစိတ်အပိုင်းများကို စုစည်းတပ်ဆင်ပြီး နောက်ဆုံး Final Product ရရှိအောင် တည်ဆောက်တဲ့နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။ ဒုတိယအချက်ကတော့ လူလတ်တန်းစား Level အထိ လက်လှမ်းမှီအောင် ဈေးနှုန်းလျှော့ချထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်.။ တတိယအချက်ကတော့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကား Market ကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာအောင် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။ Assembly Line ကိုအသုံးမပြုခင်တုန်းက ကားတည်ဆောက်ရာမှာ အစအဆုံး တစ်နေရာတည်းမှာ အပြီးအစီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ Henry Ford ဟာ Assembly Line နည်းလမ်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့် ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်.။ ယနေ့ခေတ်မှာလဲ ထုတ်လုပ်တဲ့ နည်းစနစ် (ဥပမာ စက်ရုပ်လက်တံများ အသုံးပြုထုတ်လုပ်ခြင်း) တွေပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့် Assembly Line နည်းစနစ်ကိုတော့ ဆက်လက်အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်.။ Assembly Line စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့တာမို့ လူချမ်းသာမဟုတ်တဲ့ လူလတ်တန်းစားတွေ ဝယ်ယူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်.။ Ford ဟာ ကားတွေကို ကမ္ဘာအနှံ့မှာ စက်ရုံတွေတည်ထောင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ တင်ပို့တဲ့အခါ သယ်ယူပို့ဆောင်ခ ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး.။ အခြားကားကုမ္ပဏီတွေက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကားတွေကို တည်ဆောက်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပေမယ့် Ford ကတော့ Model T ရဲ့ ဈေးနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းနဲ့ အခြားလိုအပ်ချက်တွေကို တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး.။ ဒါဟာ အခြားကားကုမ္ပဏီတွေကို အခွင့်အရေးပေးသလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကားလောကအနာဂတ်အတွက် အကျိုးရှိစေခဲ့ပါတယ်.။
3. CADILLAC'S TOURING EDITION – 1912
4. ESSEX'S CLOSED COACH – 1918
Essex ဟာအစပိုင်းမှာ Hudson ရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲအဖြစ် စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် လေးနှစ်ကြာအပြီးမှာ Model တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်.။ အဲဒီလေးနှစ်အတွင်းမှာ Essex ဟာ သေးငယ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ ကားလေးတွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်.။ ဒါ့အပြင် Essex ဟာ အလုံပိတ်ကားပုံစံကိုလဲ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး အမိုးဖွင့်ကားတွေကို အပို Option အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်.။ Essex ကြောင့်ပဲ ယနေ့ခေတ်ကားလောကမှာ အလုံပိတ်ကားတွေဟာ ပိုမိုအသုံးများခဲ့ပြီး Convertable လို့ခေါ်တဲ့ အမိုးဖွင့်ကားတွေကတော့ ဈေးပိုကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။
5. FORD'S MODEL 18 – 1932
6. BUICK'S Y-JOB – 1938
7. VOLKSWAGEN'S BEETLE – 1938
မြန်မာပြည်မှာ လိပ်ခုံးကားလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ BEETLE ဟာ 1938 ခုနှစ်မှာ ပိုမိုသေးငယ်ကျစ်လျစ်ပြီး၊ မောင်းနှင်ရလွယ်ကူတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ ဈေးလဲမကြီးတဲ့ မော်ဒယ်အနေနဲ့ စတင်ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး 1945 ခုနှစ်မှာ ဒီကားဟာ အများပြည်သူအကြားရေပန်းစားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ The Beetle ကားဟာ 2003 ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်း ၆၅ နှစ်ကြာအောင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး မော်ဒယ်အဖြစ် စံချိန်တင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်.။ ဒီကားဟာ အစီးရေအများဆုံး ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကားအဖြစ်လဲ စံချိန်တင်ထားခဲ့ပြီး သက်တမ်းတစ်လျှောက် အစီးရေ ၂၁ သန်းအထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသတဲ့.။ ဒီကားကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သူကတော့ Ferdinand Porsche ဖြစ်ပါတယ်.။ သူဟာ နောက်ပိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင်ကားတွေမှာ Bettle ရဲ့ ကားဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့ အနောက်အင်ဂျင်နဲ့ နောက်ဘီးယက်ဒီဇိုင်းကို ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်.။
8. BANTAM'S JEEP – 1940
9. BMC'S MINI – 1959
BMC ရဲ့ Mini ဟာ ဆီစားသက်သာမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးမှု စတဲ့ Economy ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ကားအသေးဈေးကွက်ကို ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်.။ ယခုအခါမှာတော့ Mini တွေကို ရှေ့အင်ဂျင်၊ ရှေ့ဘီးယက်စနစ်နဲ့ ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်.။ Mini ဟာ နေရာစားသက်သာစေတဲ့ rubber cones တွေကို ဂီယာစနစ်အတွင်း စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကားလဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။
10. COOPER'S T43 – 1957
11. FORD'S MUSTANG – 1964
Mustang 1964 ဟာ Ford Falcon's compact-sized economy car platform ပေါ်မှာ အခြေတည်ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အရှေ့ဘက်ပိုင်းကို ပိုမိုရှည်လျားစေပြီး အနောက်ပိုင်းကို အနည်းငယ်တိုထားခဲ့တဲ့အတွက် ပိုမိုပြီး Powerful ဖြစ်စေတဲ့အမြင်ကို ရရှိစေပါတယ်.။ ဒီကားဟာ မိသားစုသုံးကားမဟုတ်ဘဲ Sport Type အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Ford ကုမ္ပဏီရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ကားတစ်စီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်.။ ယနေ့ခေတ်အချိန်ထိ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး sport ကားတစ်စီးလဲ ဖြစ်ပါတယ်.။
12. CHRYSLER'S MINIVAN – 1984
1984 မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Minivan ဟာ မိသားစုသုံးကားဈေးကွက်ကို တစ်နှစ်အတွင်းပြောင်းလဲ စေခဲ့ပါတယ်.။ Minivan တွေဟာ Station wagon တွေကို အစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး Chrysler ဟာ Minivan တွေကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ ဝယ်လိုအားကို ပြည့်မီအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အထိ ရောင်းအားကောင်းခဲ့ပါတယ်.။ ဒါကြောင့် ပြိုင်ဘက်တွေဟာ Minivan အမျိုးအစားကားတွေကို ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ဝေစုရယူဖို့ ယှဉ်ပြိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်.။ Minivan ဟာလဲ ကားလောကကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ကားအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။
13. TOYOTA'S PRIUS – 1997
1995 ခုနှစ် Tokyo Motor Show မှာ Toyota ဟာ Hybrid ကားအမျိုးအစားတစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်.။ ပထမဆုံး Prius ကားကို 1997 ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Car of the Year Japan ဆု၊ 1998 ခုနှစ်မှာ Automotive Researchers' and Journalists' Conference Car of the Year ဆုတို့ကို အသီးသီးဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်.။ Prius ဟာ ယနေ့ခေတ် Hybrid ကားတွေရဲ့ ပထမဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Hybrid ကားလောကကို တစ်ခေတ်ဆန်းစေခဲ့တဲ့ ကားအမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်.။